စစ်တပ်အငြိမ်းစားအရာရှိတွေကို နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ရုံးချုပ်မှာ အဆင့်မြင့်ရာထူးတွေ ပေးအပ်လိုက်တာ ကို ဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့က ပျဉ်းမနားမြို့နယ်က ရှေ့နေတွေ အဝါရောင်ဖဲကြိုးလှုပ်ရှားမှုကို စတင်ခဲ့စဉ်
Photo: ဦးခင်မောင်ဇော် ဖေ့ဘုတ်
ရှေ့နေအသင်း ဥက္ကဌ ဦးခင်မောင်ဇော်ကို မေးမြန်းချက်
တပ်မတော်အငြိမ်းစား အရာရှိ ၂ဝ နီးပါးလောက်ကို နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ရုံးချုပ်မှာ အဆင့်မြင့်ရာထူးတွေ ပေးအပ်လိုက်တဲ့အတွက် ပျဉ်းမနားမြို့နယ်က ရှေ့နေတွေက သူတို့လုပ်ငန်းခွင်မှာ အဝါရောင်ဖဲကြိုးတွေ တပ်ဆင်ပြီး ဒီနေ့ စတင်ကန့်ကွက်ကြပါတယ်။
တပ်မတော်က တရားစီရင်ရေးကဏ္ဍတွေမှာ နေရာဝင်ယူလာတာကို ဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ အ၀ါရောင်ဖဲကြိုး လှုပ်ရှားမှုကို တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ ပျဉ်းမနားမြို့နယ် ရှေ့နေအသင်း ဥက္ကဌ ဦးခင်မောင်ဇော်က ပြောပါတယ်။
"ကျန်းမာရေးလောက တရားစီရင်ရေး လောကထဲမှာတင် မဟုတ်ဘူးဗျ၊ ဒီဗမာပြည်ရဲ့ ဝန်ကြီးဌာန အားလုံး လောကအားလုံးမှာ စစ်တပ်က မိုးကျရွှေကိုယ်တွေ ဝင်လာတာကို ဆန့်ကျင်ပါတယ်၊ ဖဲကြိုးလှုပ်ရှားမှုတွေက အကုန်လုံးပေါင်းစည်းပြီး တစ်ပြည်လုံးပျံ့နှံ့သွားတဲ့အထိ ကျနော်တို့ဆက်လုပ်မှာပဲ"
ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လက စစ်တပ်က အငြိမ်းစားအရာရှိတွေကို ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ရုံးချုပ်မှာ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရာထူးကစပြီး ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
မနက်ဖြန် နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ ၈ မြို့နယ်က တရားရုံးတွေမှာ ဖဲကြိုးအ၀ါတွေကို လိုက်လံဖြန့်ဝေသွားမယ် လို့ သိရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လအတွင်းကလည်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကို စစ်တပ်က အငြိမ်းစားအရာရှိတွေ ရွှေ့ပြောင်းလာတဲ့ အတွက် ဆရာဝန်တွေက အနက်ရောင်ဖဲကြိုးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ပျဉ်းမနားမြို့နယ် ရှေ့နေအသင်း ဥက္ကဌ ဦးခင်မောင်ဇော်ကို RFA အဖွဲ့သူ မခင်ခင်အိ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
တရားမမှုတွေကို စေ့စပ်ဖြေရှင်းတဲ့ နည်းလမ်းကျင့်သုံးမည်
တရားစီရင်ရေးမှာ လွှမ်းမိုးခံရမှုနဲ့ အဂတိလိုက်စားမှုရှိနေဆဲလို့ အစီရင်ခံစာ ထောက်ပြ
ဖမ်းဆီးခံကျောင်းသားတွေ လွတ်လပ် တဲ့ တရားစီရင်ရေး တောင်းဆို
တရားရုံးတွေ လာဘ်စားမှု မြောင်းမြမြို့ခံတွေ ဆန္ဒပြ
ရွေးကောက်ပွဲ အပြီး အရပ်သား အုပ်ချုပ်ရေး ဖြစ်ခဲ့သော် အုပ်ချုပ်လို့ မရအောင် ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားတာ။ တိုင်းပြည်ကို ရှုပ်ထွေးအောင် လုပ်တဲ့သဘောပဲ။
Sep 10, 2015 08:18 PM
That is exactly to protect themselves during coming new government when ruling by other party as they are about to loose in coming election. How dirty USDP government? They are not like fellow Burmese national.
Sep 10, 2015 05:27 AM
ရွေးကောက်ပွဲ အပြီး အရပ်သား အုပ်ချုပ် ရေး ပြီပြီပြင်ပြင် လုပ်လို့ မရအောင် ဌာန အားလုံးမှာ တပ်ကလူတွေ ချထားတာ။ တိုင်းပြည်ပျက်စီးရေး ဦးတည်ချက်ချက် ပဲ။
စစ်တပ်မှာ ဥပဒေ ဘယ်လောက်ပဲ နားလည်နေ နေ စစ်တပ် အုပ်ချုပ်ရေး တရားစီရင်ရေးနဲ့အရပ်ဖက် အုပ်ချုပ်ရေး တရားစီရင်ရေး တွေ ဟာ သဘာဝချင်းမတူပါဘူး။ အာဏာရှင် အမိန့် နာခံမဲ့ တပ်ကလူတွေ ကြိုထည့်ထားတဲ့သဘောပါ။
Sep 09, 2015 08:39 PM
တိုင်းပြည် ကိုအုပ်ချုပ်ရေး ပျက်ပြား အောင် ရှုပ်ထွး အောင် လုပ်တဲ့နည်းပေါ့။ ရွေးကောက်ပွဲ ရှုံးခြေ များနေလို့ အမိန့် နာခံတဲ့ စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေး လွှမ်းမိုးရအောင် နိုင်ငံတော်လုပ်ကျြံမှုပဲ။ ဒီလိုလုပ်ခဲ့လို့တိုင်းပြည်ပျက်စီးခဲ့ပြီးပြီ။ သူတို့ အာဏာမဲ့ သွားရင် သူတို့ လုံခြုံရေး ကို စိုးရိမ်တာ အဒိကပဲ။ တိုင်းပြည်အတွက်ဆိုတာ အလကား။ တကယ်တိုင်းပြည် အတွက်ဆိုရင် ခုဒီမိုကရေစီ လမ်းဟာ ဆက်ဖို့ဖြောင့်ဖြူးနေပြီပဲ။ ဆက်တွန်းအားပေးရုံပဲရှိတယ်။ ဆင်းခါနီး အလျင်အမြန် လုပ်နေတာကြည့်လေ။
Sep 09, 2015 08:34 PM